Qorshaha qolka fadhiga wuxuu kaalin muhiim ah ka ciyaaraa qurxinta guriga. Qolkan ayaa qaraabo dhow iyo saaxiibo qadiimi ah soo ururiya, qoysas badan ayaa u dabaaldega fasaxyada muhiimka ah isla markaana nasasiiya ka dib maalin shaqo adag. Taasina waa sababta ay muhiim u tahay in qolka fadhiga uu muujiyo dareen raaxo iyo raaxo guri. Si aad u gaarto hadafkan, uma baahnid inaad doorato oo kaliya inaad xushaan wallpaper iyo daahyada, laakiin si sax ah u dooro qalabka si sax ah. Halkan, derbiyada dhejinta roogga ayaa faa'iido leh marna ka hor. Waxay si fiican ugu haboon yihiin naqshadda qolka oo waxay u adeegi doonaan inay ku kaydiyaan meelo fudud oo loogu talagalay noocyo kala duwan.
Waxaa jira xayiraad aan la xakameynin oo derbiga waa in ay ahaato mid daruuri ah derbiga guud ee qolka. Xaqiiqdii, ururrada noocaas ah waa kuwa ka hadhay wakhtiyada Soofiyeeti, markii dadka oo dhan ay buuxsameen guryo qalab isku mid ah oo isku mid ah oo ay ku xidheen qalabyada isla muraayadaha muraayadda ah. Maalmahaas, derbigu wuxuu ahaa calaamad muujinaysa barwaaqada qoyska, waxaana lagama maarmaan u ahaa qolka ugu wayn ee aqalka, sida hoolka.
Maanta fikradda ayaa waxoogaa badashay, dadkuna waxay bilaabeen inay qiimeeyaan shaqeynta iyo isdhexgalka alaabta guriga. Tani waxay sabab u ahayd muuqaalka darbiga derbiyada cusub, waxtar badan oo ku habboon marka la eego isticmaalka. Dhismaha derbiga casriga ah ee hoolka ayaa leh dhowr faa'iido oo ka dhigaysa mid hufan oo raaxo leh intii suurtogal ah:
Ha ku dhejin qolka, adigoo xaraarad leh oo aad u ballaaran;
Wuxuu leeyahay nuugyo lagu dhisay LCD-TV;
sababtoo ah qiyaasta yar yar ma uruurin boodo badan;
ku habboon guri yar oo hal qol jiif ah;
waxay u adeegtaa sidii bakhaarro loogu talagalay qaababka waxtarka leh (buugaag, konsks, dokumantiyo, maacuun).
Sariirado badan ayaa leh muraayado asal ah oo daboolaya dhalada ama muraayadda daboolan. Hawlaha casriga casriga ah ayaa ka maqan ama waxaa lagu sameeyaa nooc cusub oo xiiso leh - albaabbada iyo joodariyayaashu waxay ku shaqeeyaan iyagoo isticmaalaya tiknooloojiyada "furtay-furan". Mararka qaarkood qalabka ayaa lagu beddelayaa indhoolaha albaabka.
Noocyada waxaa kale oo jira darbiyo qumman oo leh facets ka samaysan qoryo adag ama xayawaanka noocyada alwaax qaali ah. Iyadoo loogu talagalay qaybaha istiraatiijiga ah, waxay ku jiraan muuqaalka MDF ama qoryaha. Waxyaabaha ku yaal albaabbada alaabta qolka kabadhada ee qaabka fasalka waa qasab. Xulashada waxaa la siiyaa qalabka naxaasiga ah ama roodhida dahabka, xusuusta qaabka dhibcaha, fangaska ama tuubooyinka.
Iyada oo ku xiran qaabeynta, darbiyada rooga waxaa loo qeybin karaa dhowr nooc:
Qalab yar-yar oo gidaar ah . Alaabtaasi waa mid aad u habaysan oo ku haboon qolalka ugu yar ee guriga. Waxay ka kooban tahay miis dhagax, nuche hoostiisa TV-yada iyo walxaha dheeraadka ah (xarumaha waaweyn ee cidhiidhiga, sanduuqyada). Sariirku gabi ahaanba ma dabooli karo derbiga, isaga oo ka tagaya farqiga u dhaxeeya qashinka iyo golaha.
Darbiyada derbiga geesaha ah . Miyaad rabtaa inaad gashid derbiga bilaashka ah ee qolka fadhiga ee leh alaabta guriga? Ka dibna qalabka korontada ku dheji meel geesin ah. Waxay qaadataa boos yar oo waxay ku dari doontaa gudaha gurigaaga asaas ahaan asalka. Derbiga noocan oo kale ah ayaa sida caadiga ah la siinayaa golaha wasiirada, oo ku yaal qaybta geeska. Labada dhinac ee golaha wasiiradu waa koofiyado qalin leh, armaajo iyo dhameytirka dambiilayaasha, iyagoo siiyay sawir dhammaystiran.
Dhagaxyo leh daaqadaha dukaamada . Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jecel inay sawirro sawiro, farshaxan iyo farsamo. Ka danbeeya galaaska waxaad ku dhejin kartaa qalab qaali ah oo muujin doona dhadhankaaga iyo ku darida gudaha gurigaaga. Intaas waxaa sii dheer, derbiyada leh daaqadaha muujinaysa muuqaal ah oo ballaadhan kuna dar qolka iftiinka.
Marka aad dooranayso derbi-gaari, hubso in aad tixgeliso qaabka iyo qaabka qolka.
Inaad diirimaad ka samaysatid loggia?
Kursiga suunka kursiga - sida loo doorto alaab aan la karin?
Sariirta qolka jiifka
Laminate for musqusha - sida ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo dabool aan caadi ahayn qolkan?
Sawirrada madow ee gudaha gudaha
Qalabka-indhoolayaasha daaqadaha caaga ah
Dayaxyo casri ah - qaab quruxsan, raaxo iyo shaqeyn
Shaxda sare ee ka samaysan dhagax macmal ah ee musqusha
Waa maxay saqafka jikada?
Meelaha sare ee sariirta
Albaabka qabow ee sauna
Indhaha xanuunka cunugga - ma ka mid tahay in lagu daaweeyo guriga?
Steven Tyler ayaa soo jeediyay in gacanta loo dhigo iyo qalbiga 28-sano jirkaan
Kabaha maryaha ah ee dhejiska
Goolashada gooyaa ka dib ubax
Darsonvalisation of timaha
Gabadhii, yaad tahay? Natalia Vodyanova ayaa ku jahawareersanayd ... Rihanna
Diyaarinta canab si jiilaalka ah
Jidhka jaalaha ah
Ma qaboojiyey kaadiheysta waxa la samaynayo ama sameynayo?
Boogta oo ku leh alaabta guriga
Waa maxay sababta aad u riyootay?
Qarsoodiga ah in miisaanka luminayo Pink: laga jaray 22 kg!
Pihors ka soo caansan Talyaaniga Garioldi
Dharka madow oo leh dabool cad - oo leh waxa la gashado iyo sida loo abuuro sawirrada masraxa?
Muujinta timaha leh chamomile
Timaha timaha leh timo qulqulaya
Sepsis - calaamadaha
Maxaa la xidhiidha dharka jilibka sare?
Meelaha lafdhabarta - xayawaanka waxtarka leh
Patties «Bombochki» oo leh yaanyada iyo farmaajada - cunto karinta